laacib » RASMI: 23-ka ciyaaryahan ee xulka qaranka England uga qeyb galaya Koobka Adduunka 2018 oo la shaaciyey – Yaa ku jira yaase maqan?
RASMI: 23-ka ciyaaryahan ee xulka qaranka England uga qeyb galaya Koobka Adduunka 2018 oo la shaaciyey – Yaa ku jira yaase maqan?
Waxaa la shaaciyey 23-ka ciyaaryahan ee xulka qaranka England uga qeyb galaya Koobka Adduunka ee sanadkan 2018.
Trent Alexander-Arnold iyo Ruben Loftus-Cheek ayaa ka mid ah 23-ka ciyaaryahan ee kama dambeysta ah ee xulka qaranka Ingiriiska uga qeyb geli doona Koobka Adduunka ee bisha soo socota ka furmaya dalka Ruushka.
Goolhayaha laacibkii Burnley ee Nick Pope ayaa ka mid ah shaxda kama dabeysta ah ee macallin Gareth Southgate ula safraya Ruushka sanadkan 2018, taasoo la micno ah inuusan xulkan boos ka helin goolhayaha koowaaad ee xulka Joe Hart.
Southgate ayaa shaxdiisa ku daray labada ciyaaryahan ee da’da yar ee Alexander-Arnold oo ay u badan tahay inuu wacdaro ka dhigo kulanka kooxdiisa Liverpool ay ciyaareyso Isbuuca soo socda final-ka Champions League iyo xiddiga laacibkii Chelsea ee Loftus Cheek.
Waxaa sidoo kale shaxdan seegan goolhayahe Hart oo amaah kula jooga West Ham United, xiddiga khadka dhexe ee Arsenal Jack Wilshere iyo laacibka laacibkii Liverpool ee Adam Lallana.
Waxaa wicitaan helay kabtanka laacibkii Chelsea ee Gary Cahill inkastoo dhaawac looga tagay Alfie Mawson.
James Tarkowski ayaana ah xiddigaha ee heeganka ugu jira xulka Ingiriiska.
Lewis Cook, Tom Heaton iyo Jake Livermore ayaa kula biiray Lallana iyo Tarkowski xiddigaha heeganka ku jira oo loo yeeri karo haddii ay lagama maarmaan u noqoto xulka saddexda libaax.
Halkaan hoose ka eeg 23-ka ciyaaryahan ee kama dambeysta ah oo xulka England u meteli doona Koobka Adduunka 2018:-
Goolhayeyaasha: Butland, Pickford, Pope
Difaacyada: Alexander-Arnold, Cahill, Delph, Jones, Maguire, Rose, Stones, Trippier, Walker, Young.
Khadka Dhexe: Alli, Dier, Henderson, Lingard, Loftus-Cheek.
Weerarka: Kane, Rashford, Sterling, Vardy, Welbeck